Ikhaya iimveliso DataNumen Excel Repair filename.xls 'Ayinakufikelelwa.
Ulwazi oluneenkcukacha malunga ne "filename.xls 'Ayinakufikeleleka" Impazamo
Xa uvula ifayile eyonakeleyo okanye eyonakeleyo ye-Excel XLS okanye ifayile ye-XLSX ngeMicrosoft Excel, ubona lo myalezo wempazamo ulandelayo:
apho 'igama lefayile.xls' ligama elonakeleyo lefayile ye-Excel.
Xa ifayile ye-Excel XLS okanye i-XLSX yonakele kwaye iMicrosoft Excel ayinakuyibona, i-Excel inokuxela le mpazamo. Ulwazi lwempazamo luyalahlekisa kuba lusithi ifayile ayinakufikeleleka kuba iyafundwa-kuphela. Nangona kunjalo, eyona fayile ayifundwanga kuphela, ukuba yonakele, i-Excel isazakuxela le mpazamo ngempazamo.
Ungaqala ujonge ukuba ngaba ifayili ifundwa kuphela, kwindawo yokufunda kuphela, okanye kwiseva ekude. Ukuba ifayile ikwindawo ekufundwayo kuphela okanye kwiseva ekude, zama ukukopa ifayile kwindawo yokufunda-kuphela okanye iserver kwidrive ebhaliweyo kwikhompyuter yendawo. Qiniseka ukuba ususa uphawu lokufunda kuphela kwifayile ye-Excel.
Ukuba ifayile ye-Excel ayinakuvulwa, sinokuqinisekisa ukuba ifayile yonakele. Ungaqala usebenzise Umsebenzi owenziwe ngo-Excel wokulungisa ukulungisa ifayile ye-Excel eyonakeleyo. Ukuba ayisebenzi, kuphela kuphela DataNumen Excel Repair unokukunceda.
Isampulu yefayile yeXLS eyonakeleyo eya kuthi ibangele impazamo. Impazamo5.xls
Ifayile ifunyenwe ngu DataNumen Excel Repair: Impazamo5_fixed.xls